Fumana izatifikethi zakho zokuthweswa isidanga namhlanje »IYunivesithi yaseHodges - Ukwamkelwa
iindidi: Izatifikethi zesidanga, Iinyani nje
Khetha iNkqubo yesiQinisekiso seSidanga sakho
Isatifikethi seCybersecurity Graduate
Isatifikethi seCybersecurity sisiqinisekiso seyure ezili-18 esinokugqitywa kwisemester ezimbini. Idibanisa izihloko zenkqubo ebanzi yolwazi ezinje nge Ulawulo lweQhinga leeNkqubo zeIT kunye neendlela zeIT ngezihloko ezijolise kukhuseleko kwikhompyutha ezinje Ukuthotyelwa koKhuseleko, isiQinisekiso soKhuseleko se-IT, kunye ne-Forensics ePhambili. Esi satifikethi senzelwe abo banqwenela ukugxila kukhuseleko lwe-cyber olwenziweyo lomsebenzi wabo. Ukongeza, esi satifikethi sinokulungiselela abo bafuna ukufundisa ukhuseleko kwinqanaba lekholeji. Kukho iimfuno zokumiselwa kwangaphambili kwale nkqubo, kubandakanya isidanga sebhatshela.
Isatifikethi soLawulo lweDatabase
Isatifikethi soLawulo lweDatabase sidibanisa iinkqubo zolwazi ezibanzi ezinje Iindlela zoLawulo lweIT kunye noLawulo lweQhinga ngezihloko zolawulo lwedatha ekugxilwe kuzo Indawo yokugcina idatha kunye neNkqubo yokuXhasa iZigqibo kunye noKhuseleko lweDatabase kunye noPhicotho. Le nkqubo iya kwenza ukuba uqhubele phambili kwicandelo lakho langoku okanye ulungiselele ngcono utshintsho lomsebenzi onokulugqiba kwiisemester ezimbini. Kukho iimfuno zokumiselwa kwangaphambili kwale nkqubo, kubandakanya isidanga sebhatshela.
Ukwahluka, ukulingana kunye nesiQinisekiso soBunkokeli
Ukwahluka, ukulingana kunye nobunkokeli obubandakanyayo
Isatifikethi sokuthweswa isidanga sobunkokeli, ulingano kunye nokubandakanywa kwabo banqwenela ukufunda ukutshintsha imeko-bume yomsebenzi ngokukhuthaza iyantlukwano kunye nokukhuthaza ukubandakanywa. Le nkqubo yenzelwe abaphathi kunye nabasebenzi abakwinqanaba eliphezulu kwaye inokuthathwa yodwa okanye ngokuhambelana nesidanga senkosi. Kukho iimfuno zokumiselwa kwangaphambili kwale nkqubo, kubandakanya isidanga sebhatshela.